Archive du 20180806
Marc Ravalomanana Hanao fanambarana goavana
Ambohipihaonan’ny mpanohana an’i Marc Ravalomanana ny teny amin’ny Magro Behoririka ny sabotsy 4 aogositra teo. Nitarika izany i Zafilahy Stanislas.
Solonandrasana Mahafaly Olivier “Tafasaraka ny lalana… mila avadika ny pejy”
Isan’ny tompon’andraikitra amin’izay fahombiazana na fahalemen’ny fitondrana ankehitriny ny tenako, hoy ny Praiministra Solonandrasana Mahafaly Olivier raha nivahiny tao amin’ny radio tsy miankina iray omaly atoandro.
HFI sy ny tariny Hiasa hatrany amin’ny propagandy
Hatreto, tsy mbola nisy fanambarana ofisialy fa natsahatra ny tolona etsy amin’ny 13 mey izay notohizan-dry zareo hetsika ho an’ny fanorenana ifotony na ny HFI sy ireo mpiara-dia aminy na tsy tena nahazaka vahoaka sy niato kely tato anatin’izao
Praiminisitra Ntsay Christian Totoafo ny fanakianan`ny HVM azy
Lasa lasibatry ny antoko HVM ny praiminisitra lehiben`ny governemanta, Ntsay Christian, tato ho ato.
Politika avo lenta Mampiahiahy ny fihetsik’i Zazah Ramandimbiarison
Efa hita soritra sahady ny politika avo lenta fa misy ao ambadiky ny fifidianana filoham-pirenena eto amintsika. Misy olona hita hoe miara-miasa na mifandray amina kandida vitsivitsy, toa an’i Zazah Ramandimbiarison, izay hita niaraka tamin’i José Vianey,
Fampandaniana an-dRavalomanana Miomana fatratra ny TIM Atsimo Andrefana
Mitohy foana ny fivorian’ny TIM Antsimo Andrefana ao amin’ny Magro Andaboly Toliara ny 4 aogositra 2018, tarihin’ny mpandrindram-paritra Sazalahy Tsianihy nahitana an’i Toliara I, Toliara II, Morombe, Sakaraha, Ankazoabo, Beroroha, Betioky, Ampanihy ary Benenitra.
Horonantsary mamoafady Tratra indray ny manampahefana HVM iray
Efa-bolana mahery kely taorian’ilay fiparitahana sary mamoafady mahakasika mivantana solombavambahoaka vehivavy HVM dia nipoitra indray ny horonantsary hafa,
Karazam-bibikely 37, toy ny angelikary, valala,… Azo avadika sakafo mitondra herim-batana
Anisan’ny nandray anjara tamin’ny Tsenabe Fier Mada andiany faha-20 nifarana omaly teny Andohatapenaka ny Concept Mihary, vondrona tanora izay mandalim-pahaizana ao amin’ny departemantan’ny “Hontologie” miantsoroka ny fikarohana mikasika ny bibikely ny ankamaroany.
Fanimbana ny Jirama tao Vavatenina Matahotra hisambotra ireo nahavanon-doza ny zandary
Tsy nitazam-potsiny noho ny fahazaran’ny olona manimba sy mandoro fananam-bahoaka isaky misy ny tsy mahafaly azy ireo ny Jirama Toamasina,
DJ Angelo Nodimandry rehefa narary am-bolana maro
Taitra avokoa ireo olona rehetra nahalala an’i Todizara Angelo fantatry ny maro amin’ny hoe DJ Angelo noho asa maha mpanentana azy amin’ireo trano fandihizana sy lanonana,
Fikambanan’ny tanora mpanao rugby Hanao fihetsehana hanesorana ny filohan’ny FMR
Taorian’ny fanatanterahana ny hetsika lalao rugby “Coupe de l’independance 2018” D-1 nifanandrinan’ny Savage Rose Antohomadinika sy Kma Antetezana Afovoany (8-8) ka
Kitra – Poule des As Ny Fosa Juniors no nibata fandresena voalohany
Ny ekipan’ny Fosa Juniors Boeny no nibata fandresena voalohany tamin’ny lalao “Poule des As Champions League Malagasy 2018”. Resiny tamin’ny isa 2-1 tetsy Mahamasina tamin’ny sabotsy 4 aogositra teo ny Elgeco Plus Analamanga mpampiantrano.
Basikety U 14 sy Vétéran - Analamanga Mb2All , Dtsc , Jcba ary ny Bbcm no tompondaka
Tontosa omaly tolakandro tetsy amin’ny kianja mitafon’i Mahamasina ireo lalao famaranana 4, sokajy U 14 zazalahy sy zazavavy ary sokajy veteran lahy sy vavy ihany koa.
Tournoi Rugby Mazavaloha Tfma Flesy sy 3Fb no hanao famaranana
Nikarakara “Tournoi Rugby” tetsy amin’ny kianjan’i Malacam Antanimena nanomboka omaly alahady 5 aogositra ny fikambanana Mazavaloha tarihan’ny filohany Rabarinala Gilbert.
Vakiana fotsiny ianareo e !
Mifanisika ny hiady seza ho lasa filoha ny mpanao politika maro, izay tsy vitsy ny mitifitra lanitra mba hahavoazana tendrombohitra.
Erick Rajaonary Manampy ny Tantsaha
Notanterahina ny sabotsy 4 aogositra lasa teo teny amin’ny Kianja Makis Andohatapenaka nandritra ny hetsika FIER Mada ny fanaovana sonia fifanaraham-piaraha-miasa eo amin'ny orinasa Guanomad sy ireo fikambanana tantsaha maro isan-karazany.
Fanjifana solika Ny orinasa tsy miankina no tena maka betsaka
Tsy mihena hatreto ny fanjifan’ny orinasa tsy miankina ny solika na dia teo aza ny fiakaran’ny vidin-tsolika matetika tato ho ato.
Haba alaina amin'ny tataom-bidy Tokony hisy karazany 2
Anisan’ny torolalana mila atao napetraky ny tetikasan’ny firenena mikambana ho amin’ny fampandrosoana (PNUD) ao anatin’ny tatitra nasionalin’ny fampandrosoana ny maha olona (RNDH 2018) ny fanitsiana ny haba alaina amin'ny tataom-bidy (TVA).
Fampidinana ny vidin-tsolika Azo atao tsara, hoy ny UCTU sy ny MCI
Tena mafy loatra ny fahoriana mianjady amin’ny vahoaka Malagasy, hoy ny tambajotra miady amin’ny fiakaran’ny vidim-piainana (MCI) sy ny fikambanana RNDC mpiaro ny zon’ny mpanjifa ny sabotsy teo teny Soarano.